Amandla e-Kinetic namandla angaba khona: izici, umehluko nokubaluleka | Green Renewables
amandla kinetic namandla angaba khona
IsiJalimane Portillo | 11/05/2022 12:00 | Ukuziqeqesha
Amandla e-kinetic amandla ahlobene nokunyakaza futhi amandla angaba khona amandla ahlobene nendawo ohlelweni. Ngokuvamile, amandla yikhono lokwenza umsebenzi. Kokubili amandla e-kinetic namandla angaba khona amelela izinhlobo ezimbili eziyisisekelo zamandla akhona. Noma yimaphi amanye amandla inguqulo ehlukile yamandla angaba khona noma amandla e-kinetic noma inhlanganisela yakho kokubili. Ngokwesibonelo, amandla mechanical inhlanganisela amandla kinetic namandla angaba khona.
Kulesi sihloko sikutshela konke okudingeka ukwazi mayelana namandla e-kinetic namandla angaba khona, izici zayo nezibonelo.
1 amandla kinetic namandla angaba khona
1.1 Amandla we-Kinetic
1.2 Amandla we-Kinetic
2 Amandla e-kinetic asebenza kanjani?
3.1 amandla adonsela phansi
3.2 amandla anamandla okunwebeka
3.3 Amakhemikhali angaba namandla
3.4 amandla e-electrostatic amandla
Amandla e-Kinetic uhlobo lwamandla ahlotshaniswa nokunyakaza. Konke okunyakazayo kunamandla e-kinetic. Ku-International System (SI), iyunithi yamandla e-kinetic yi-jouje (J), okuyiyunithi efanayo nomsebenzi. Ijoule eyodwa ilingana no-1 kg.m2/s2. Kunezibonelo eziningi zokusebenzisa amandla kinetic ekuphileni kwansuku zonke.
Ukubhowula: I-Bowling ngumuntu ophonsa ibhola le-3-7kg ukuze ashaye phansi izikhonkwane ezingu-10, okusekelwe kumandla we-kinetic aphethwe yibhola, okuncike kusisindo nesivinini sebhola.
Umoya: Umoya awulutho ngaphandle komoya onyakazayo. Amandla e-kinetic okunyakaza komoya angaguqulwa abe ugesi kusetshenziswa izinjini zomoya.
Amandla ashisayo: Amandla ashisayo amandla e-kinetic ahlobene nokunyakaza kwezinhlayiya ezincane kakhulu ohlelweni. Lapho sishisa amanzi noma enye into, sengeza amandla e-kinetic ngokudluliswa kokushisa.
Amandla angaba khona wuhlobo lwamandla ahlobene nendawo ehlobene ngaphakathi kwesistimu, okungukuthi, indawo yento eyodwa ngokuhlonipha enye. Ozibuthe ababili abahlukene banamandla anamandla ahlobene nomunye nomunye. Ku-SI, iyunithi yamandla angaba khona yi-jouje (J), kanjalo namandla e-kinetic. Ijoule eyodwa ilingana no-1 kg.m2/s2.
Imithombo eminingi esiyisebenzisela amandla incike emandleni angaba khona.
Amandla agcinwe emadamini: Amanzi agcinwe endaweni ephakeme, njengedamu, anamandla adonsela phansi. Uma amanzi ewa, aguqula amandla angaba khona abe amandla e-kinetic akwazi ukwenza umsebenzi kuma turbines atholakala ezansi kwedamu. Ugesi okhiqizwa yilawa ma-turbines usatshalaliswa kunethiwekhi yendawo.
Iziphethu: Uma isiphethu sinwetshwa noma sicindezelwa, sigcina inani elithile lamandla ngendlela yamandla anamandla anwebekayo. Lapho intwasahlobo ikhishwa, amandla angakhona agciniwe aguqulwa abe amandla e-kinetic.
Umnsalo nomcibisholo: Umnsalo nomcibisholo kuyisibonelo sokuthi amandla anwebekayo aguqulwa abe amandla e-kinetic. Lapho intambo yomnsalo yeluliwe, umsebenzi owenziwe ugcinwa entanjeni enwetshiwe njengamandla angaba namandla. Uma ukhulula intambo, amandla anamandla entambo aguqulwa abe amandla e-kinetic, abese edluliselwa kumcibisholo.
Ugesi: Ugesi uwuhlobo lwamandla angaba khona anqunywa indawo yezindleko ohlelweni (inkambu kagesi).
Amandla e-kinetic asebenza kanjani?
Uma into ihamba kungenxa yokuthi inamandla e-kinetic. Uma ishayisana nenye into, ingadlulisela la mandla kuyo, ngakho into yesibili nayo iyanyakaza. Ukuze into ithole ukunyakaza noma amandla e-kinetic, umsebenzi noma amandla kufanele kusetshenziswe kuyo.
Uma amandla esetshenziswa isikhathi eside, sikhulu isivinini esitholwa into ehambayo kanye namandla ayo e-kinetic. IMisa ibuye ihlobane namandla okunyakaza. Uma ubukhulu bomzimba bukhulu, amandla e-kinetic makhulu. Ingaguqulwa kalula ibe ukushisa noma ezinye izinhlobo zamandla.
Phakathi kwezici zamandla kinetic esinazo:
Kungenye yezibonakaliso zamandla.
Ingadluliswa isuka komunye umzimba iye komunye.
Ingaguqulwa ibe olunye uhlobo lwamandla, isibonelo, ibe amandla ashisayo.
Kufanele usebenzise amandla ukuze uqalise ukunyakaza.
Kuya ngesivinini nesisindo somzimba.
Isamba samandla e-kinetic kanye namandla angaba khona akhiqiza amandla okusebenza (amandla ahlobanisa indawo yento nokunyakaza kwayo). Njengoba kushiwo ngaphambili, I-dynamics ibhekisela ekuhambeni. Amandla asho inani lamandla agcinwe emzimbeni ngesikhathi sokuphumula.
Ngakho-ke, amandla angaba khona azoncika endaweni yento noma isistimu ngokuphathelene nenkambu yamandla eyizungezile. Amandla e-kinetic ancike ekunyakazeni kwento.
Amandla adonsela phansi achazwa njengamandla ento enkulu lapho icwiliswa endaweni yamandla adonsela phansi. Izinkambu zamandla adonsela phansi zidalwe eduze kwezinto ezinkulu kakhulu, njengoquqaba lwamaplanethi nelanga.
Isibonelo, i-roller coaster inamandla amakhulu kunawo wonke endaweni yayo ephakeme kakhulu ngenxa yokucwiliswa kwayo endaweni yamandla adonsela phansi eMhlabeni. Uma imoto iwe futhi ilahlekelwa ukuphakama, amandla angaba khona aguqulwa abe amandla e-kinetic.
amandla anamandla okunwebeka
Amandla anamandla e-elastic ahlobene nezakhiwo ezinwebekayo zento, okungukuthi, ukuthambekela kwayo ukubuyela esimweni sayo sasekuqaleni ngemva kokuba ngaphansi kwamandla okuguquka okukhulu kunokumelana kwawo. Isibonelo esisobala samandla anwebekayo yi amandla aphethwe isiphethu, anwebekayo noma afinyezeke ngenxa yamandla angaphandle futhi abuyele endaweni yawo yasekuqaleni uma amandla angaphandle engasasetshenziswa.
Esinye isibonelo uhlelo lomnsalo nomcibisholo, lapho umnsalo udonswa ngemicu enwebekayo, amandla anamandla okunwebeka afinyelela ezingeni eliphakeme, agobe kancane ukhuni, kodwa ijubane lihlala liziro. Ngokuphazima kweso, amandla anamandla aguqulwa abe amandla e-kinetic bese umcibisholo udubula uphume ngesivinini esigcwele.
Amakhemikhali angaba namandla
Amandla anamandla ekhemikhali amandla agcinwe kumabhondi amakhemikhali ama-athomu nama-molecule. Isibonelo iglucose emzimbeni wethu, okuyinto igcina amandla angamakhemikhali aguqulwa umzimba wethu (ngenqubo ebizwa nge-metabolism) ibe namandla ashisayo ukuze kugcinwe izinga lokushisa lomzimba.
Kungokufanayo nangamafutha ezinsalela ezimbiwa phansi (ama-hydrocarbon) ethangini likaphethiloli wemoto. Amandla anamandla amakhemikhali agcinwe kumabhondi amakhemikhali kaphethiloli aguqulwa abe amandla emishini anika imoto amandla.
amandla e-electrostatic amandla
Kugesi, umqondo wamandla angenzeka nawo uyasebenza, ongaguqulwa ube ezinye izinhlobo zamandla, njenge i-kinetic, eshisayo noma ekhanyayo, uma kubhekwa ukuguquguquka okukhulu kwe-electromagnetism. Kulesi simo, amandla avela emandleni kagesi adalwe yizinhlayiya ezikhokhisiwe.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana namandla e-kinetic namandla angaba khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » General » Ukuziqeqesha » amandla kinetic namandla angaba khona
Indlela yokuthambisa imvelo ngaphandle kwe-humidifier